Teboka vavaka mba hitahiana trano vaovao | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka mba hitsodrano trano vaovao
Androany isika dia hiatrika teboka vavaka mba hitahiana trano vaovao. Ny bokin'ny Salamo 127: 1 Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana foana ny mpanao azy: raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna, dia foana foana ny mpiambina. Ny tompo ihany no mahavita trano. Mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy fantatrao fa ny trano ao anatin'ity toe-javatra ity dia tsy midika fotsiny hoe trano onenan'olona. Midika koa izany family sy ny firazanana. Kristy dia nampianatra antsika hivavaka isaky ny miditra trano vaovao isika. Nilaza i Jesosy fa isaky ny miditra an-tranon'olona isika, dia tokony hilaza koa hoe: Fiadanana ho amin'ity trano ity. Izany dia hita ao amin'ny bokin'ny Lioka 10: 5 Fa na aiza na aiza trano hidiranareo, dia lazao aloha hoe: Fiadana ho an'ity trano ity.
Na izany aza, inona no holazaintsika rehefa miditra an-trano voalohany isika? Ny mahavariana dia mbola afaka milaza ny fiadanantsika ho amin'ity trano ity isika. Rehefa milaza isika hoe hiadana amin'ity trano ity dia midika izany fa manasa an'i Jesosy hiditra ao an-tranontsika isika. Kristy dia heverina ho Andrian'ny fiadanana, amin'ny fotoana hilazana ny fiadanana ho an'ity trano ity dia nanasa an'i Jesosy mivantana niditra tao an-trano izahay. Na eo aza izany, ny vavaka ho an'ny trano vaovao dia mihoatra izany. Voalohany dia mila misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fitahiany trano vaovao. Ankoatr'izay, mivavaka izahay mba hitahian'Andriamanitra Tsitoha ny trano, ny fiarovan'Andriamanitra ary ambonin'izany rehetra izany ny fitiavan'Andriamanitra. Ireo vavaka rehetra ireo dia misy fiainana mahomby ao amin'ny trano vaovao.
Jesosy Tompo ô, misaotra anao aho noho ny fitahianao trano vaovao. Manome voninahitra anao aho satria noho ny fanomezana nomenao nahatonga an'io trano vaovao io. Misaotra anao aho satria Andriamanitra ianao. Misaotra anao aho noho ny tsy nahatonga anao tsy manan-kialofana, mankalaza anao amin'ity fialofana mahafinaritra ity aho, hisandratra avo amin'ny anaran'ny Jesosy anie ny anaranao.
Tompoko, manasa anao hiditra amin'ity trano ity aho. Mivavaka aho mba hisandratan'ny fanahinao ato amin'ity trano ity amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aho mba hitohizan'ny herin'Andriamanitra Tsitoha eo amin'ity trano ity amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga hamely ny herin'ny maizina rehetra izay mety mandrahona ny fandriampahalemana amin'ity trano ity aho, noho ny afon'ny Fanahy Masina no ananarako azy ireo.
Ray Tompo ô, ianao no andrianan'ny fandriampahalemana, mivavaka aho mba ho avy ianao hanome vola an'ity trano ity amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aho mba hitoeran'ny fiadananao amin'ity trano ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahefana sy ny fahefana rehetra izay mety nandrahona ny handray an'ity trano ity dia mivavaka aho mba handringanan'izy ireo ny afon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy.
Andriamanitra Andriamanitra ô, mivavaka aho mba hametrahanao fefy manodidina ity trano ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tananao fiarovana dia ho amin'ny olona rehetra izay honina amin'ity trano ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ny bokin'i Job 1: 10 - Moa tsy nasianao fefy manodidina azy sy ny ankohonany ary izay ananany rehetra? Notahinao ny asan'ny tànany, ka miparitaka eran'ny tany ny ondriny sy ny ombiny. Mivavaka aho mba hametrahanao fefy manodidina ity trano ity amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, tonga hamely ny fahafatesana sy ny loza aho, tsy hanana fahefana amin'ity trano ity amin'ny anaran'i Jesosy izy. Mivavaka aho mba tsy hahita lalana mankany amin'ity trano ity amin'ny anaran'i Jesosy ny fahafatesana. Ny soratra masina dia milaza fa tsy ho faty isika fa ho velona hanambara ny asan'ny tompo amin'ny tanin'ny velona. Tompoko, mivavaka aho mba tsy hisy mpikambana amin'ity fianakaviana ity ho faty amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, mivavaka aho mba hanomezanao anay fahendrena mety mba hanafahana ny tenanay amin'ireo fitaomana rehetra izay tsy hitondra afa-tsy fanaintainana sy famoizam-po ao an-tranonay amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, omeo ahy sy ny mpikambana ato amin'ity tokantrano ity ny fahasoavana hitombo amin'ny herinao sy ny herinao.
Tonga manohitra ny endrika tsy fitoviana eo afovoantsika aho. Milaza ve ny soratra masina fa afaka miara-miasa ny roa raha tsy mifanaraka? Tompoko, mivavaka aho mba hanampianay anay hamboly firaisan-kina eo afovoantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana dia nikasa ny hanafika ny fiaraha-miaina milamina eo amin'ny fianakavianay ny fahavalo, mivavaka aho mba hamongoran'ny afon'Andriamanitra azy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, Kristy dia nampianatra antsika fa ny fitiavana no didy lehibe indrindra. Mivavaka aho mba hampianarinao anay hitia ny tenantsika amin'ny fomba tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aho mba homenao anay ny fahasoavana hiaina amin'ny fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy hatrany.
Tompoko, arosoko avokoa ny zava-drehetra ary na iza na iza miara-miasa amiko ho amin'ity trano ity, dia tsy hisy ho very aho amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, resiko ny lehilahy mahery rehetra notendren'ny fahavalo hanakana anay eto amin'ity trano ity. Mananatra mafy azy amin'ny anaran'i Jesosy aho. Mivavaka aho mba hamoy ny heriny amin'ny anaran'i Jesosy ny lehilahy matanjaka toy izany. Ny fifampiraharahana amin'ny demonia rehetra izay mitranga ato amin'ity trano ity hamelezana antsika mponiny dia antsoiko aminao ny afon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, ny faka ratsy rehetra izay nambolena tamin'ny tany ka nahatonga ny fihemorana na ny fijalian'ny demonia, dia mivavaka aho mba hongotan'ny herin'Andriamanitra anio amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, na inona na inona ato amin'ity trano ity izay mety hampidi-doza ny fiainana milamina izaho sy ny fianakaviako, dia may amin'ity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ny ratsy fanahy rehetra izay notendren'ny fahavalo hanakorontana ny fandriampahalemana amin'ity trano ity dia maty amin'ny anaran'i Jesosy anio. Manidy ny varavarana amin'ity varavarana ity amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Previous lahatsoratraTeboka vavaka mba hitahiana fiara vaovao
Next lahatsoratraTeboka vavaka hialana amin'ny famoizam-po amin'ny maha mpino anao
traore salimata 31 Jolay 2021 Amin'ny 7:53 hariva
cela fait 6 ans qu il soufre d une plaie incurable et moi aussi il ya des esprits de nuits qui me tired avons beaucoup turne et sans rien et j'ai vu vos prières sur la spirituelite qui m à édifié si vous recvez mon message j 'ai vraiment besoin de vos prières pour moi et ma famille merci
mpiasa mpiasa 2 aogositra 2021 Amin'ny 7:21 maraina
Azonao atao ny miresaka amiko amin'ny alàlan'ny WhatsApp amin'ity tsipika 0703 253 3703 ity
Teboka 10 vavaka fanoherana ny fijanonana
Ahoana no ahalalako fa voavaly ny vavaka ataoko?
Zava-bita ao amin'ny bokin'ny Salamo 80